DAAWO Video: Al-Shabaab oo bilowday Xeelad ay Dumarku hubka ugu qaadaan Iyo Haweenay Lagu qabtay MUQDISHO - Hablaha Media Network
DAAWO Video: Al-Shabaab oo bilowday Xeelad ay Dumarku hubka ugu qaadaan Iyo Haweenay Lagu qabtay MUQDISHO
HMN:- Hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa gacanta kusoo dhigtay gabadh Al‐Shabaab ahayd oo lagu magacaabo Sumayo Maxamed Geedi, oo hub shacabka lagu laayo u wadday xubno kale oo ka tirsan Al-shabaab.
Gabadha oo deggan xaafadda Suuqa Bacaad ayaa kooxda Al‐Shabaab la shaqeyneysay muddo laba toddobaad ah, waxaa qoriga uu u yaallay guri labaad oo ay ka degan tahay xaafadda suuqa bakaaraha ee degmada Howl‐Wadaag. Gabadha ayaa sheegtay in kooxda Al‐ Shabaab oo ku biiriyey wiil ay horey isku yaqaaneen oo hadda jiray gobollada.
Gabadha ayaa laga soo xigtay in hubkan ay u wadday nin kale oo Al‐Shabaab ah oo lagu amray inay hubka u geyso. Waa shaqo wanaagsan oo ay qabteen ciidamada nabad sugidda, Sidookalana waxaa muuqaata in Al-shabaab ay Dumarka oo aan la Baadhin u adeegsanayaan Xeelad ay Hubka isugu gudbiyaan.